YINTONI ITAWULI YASE-ITALIYA? MALUNGA NOKUFUMANA IZIKO LOLUSU LASEKOREA - UKUPHILA
I-Intanethi icinga ukuba ufuna itawuli yase-Italiyane-kwaye ziyi- $ 2 kuphela
Ngaba ulilungu eliphethe ikhadi leSizwe sokuKhululwa? Emva koko kuya kufuneka uyazi ngetawuli yase-Italiya, isandpaper-esque mitt enqulwa ngabantu abathanda ulusu.
Yintoni itawuli yase-Italiya?
Ukuba ungomnye owela phantsi emngxunyeni womvundla kwiindawo ze-intanethi zolusu- Reddit's Ulusu lokuLungisa yifave yobuqu- emva koko usenokuba wakha wayibona itawuli yombala oluhlaza egudileyo kwaye (amaxesha amaninzi) ngaphambili. Ikwabizwa ngokuba yiKorea Exfoliating Mitt, uya kufumana amanqaku ahlukeneyo kunye nezibhengezo zothando ngale mveliso ( Andikwazi ukuyeka ukuzichukumisa! kwaye Ndiziva ngathi ndilusana yayiziingxelo zeAmazon ezibambe umdla wethu) ecaleni kwamabango okuba iyakwazi ukutshintsha ubume besikhumba kakhulu.
Ngaphandle kwegama layo, ii-mitts azinanto yakwenza ne-Italiya, ngaphandle kokuba zakhiwe ngohlobo lwe-rayon ebizwa ngokuba yi-Viscose, eyayifudula ingeniswa kwilizwe laseMeditera. Yendele kwinkcubeko ye-spa yaseKorea, i-mitt iyanconywa ngenxa yamandla ayo omlingo wokuxotha. Ngapha koko, ukuba uyakholelwa kwizithuba ezahlukileyo ezikwi-intanethi malunga noku, ngokuqinisekileyo lunyango-lwaso nasiphi na isigulo solusu. Ukucaphukisa amaqhuma amancinci abomvu kulusu olwaziwa njenge Keratosis Pilaris ? Italiyali yase-Italiya! Umile, ulusu olomileyo, oluqokelelekileyo ebusika obunzima beNew England? Italiyali yase-Italiya! Ngaba uhlaselwe yinyosi yeenyosi ezinomsindo xa usiya emsebenzini? Italiyali yase-Italiya! (Ndiyadlala nje kuleya yokugqibela.) Kodwa ngendumiso engummangaliso yetawuli, kunzima ukucinga ukuba ayinakwenza ntoni.
Yithenge: Imveliso yaseKorea yokuTyhiliza ithawula e-Itali , $ 9.99 ipakethi ye-5 kwiAmazon
Uyisebenzisa njani ithawula laseItali?
Ibhafu yindawo ekhethiweyo yokuqhekeza itawuli yakho yase-Italiya, ngakumbi emva kokuntywila kwibhafu ende, eshushu. (Ngenxa yokuba i-intanethi ingumngxuma onzulu, omnyama apho ungazingela khona iifoto zangoku zesoka lakho le-6th okanye ujonge iifoto zee-roller coasters ezishiyiweyo, uya kuthi ekugqibeleni ufumane iintlobo ezahlukeneyo emva kweefoto , apho abantu bafota khona ulusu olufileyo emva kokukhutshwa, zihlanganisiwe emazantsi ebhafu njengeentsalela zenyoka egarter.)
Ungayisebenzisa ngokwakho, okanye wongeze isepha enencasa kwiscubhu esincinci esirhabaxa. Oku kwenziwa ngcono kube kanye ngeveki, kugxilwe kwiindawo ezinoburharha ezihlala zakha ngesikhumba esifileyo, esidlakadlaka ngexesha lobusika obuqatha. Kwaye ngelixa unokuhendwa ukuba ubone into enokuyenza, thintela ukukhupha ubuso bakho (kunye nezinye iindawo ezibuthathaka) kunye neTaliyali yaseTaliyane.
Ungayifumana phi italiyali yase-Itali?
Iindaba ezimnandi! Ithawula italiyali mega-inobuhlobo, iyathengisa kwiipakethe ezi-5 okanye ezi-6 ngeerandi nje ezimbalwa isiqwenga. Elo lihle kakhulu ixabiso elivela kumaxabiso aphezulu kwiithegi zamagama ezinje nge Baiden phakathi , Ethengisa nge- $ 48.97 kwiAmazon.
UMegan Johnson yintatheli eBoston. Waqala eBoston Herald, apho abaphawuli bashiya imiyalezo emnandi njengoMegan Johnson imbi nje. Ngoku, unegalelo kupapasho olunje ngeMagazini yaBantu, iTrulia kunye neDigital Architecture.
Iindlela ezi-7 zokuQeqesha uBomi baKho kulo nyaka, ngokukaBaququzeleli boBugcisa
Ingubo engenasanti yolwandle: Ngaba ilivo ledolophu okanye kufuneka ubenayo? Savavanya omnye ukufumanisa
Amakhethini aPhambili kwiSango eliTyibilikayo?
Indawo yokuGcina eyi-8 kufuneka yenziwe-ezindlini zokulala ezincinci-ezincinci, ngokutsho kwabaYili bangaphakathi
IPottery Barn yeNew NYC yeFlegi egxila kwiindawo ezincinci, ukuhombisa ngokulula
Ungayitshintsha njani imifanekiso yesiqhelo kwiipleyiti zeCeramic
Indlu yaseKapa eyi-Beige ngoku iBhola eNothusayo, idrama, kwaye inemibala
Ezona zinto zihonjisiweyo zohlobo lweSouthwestern-Style kwiAmazon ngoku
Ngaba awufumani (okanye i-Afford) iKhitshi lesiQithana lamaphupha akho? Yenza enye kwii-IKEA Parts
Kubanda kangakanani ngaphambi kokuba uzise ngaphakathi izityalo zakho?
Jonga Sithanda: IMarble eMnyama kwigumbi lokuhlambela
Ukuqokelelwa kwezityalo zikaHilton Carter kwithagethi ngokusisiseko kukubulala-ubungqina - kwaye ungathenga isityalo sendlu ukuqala kwi $ 5
IziXeko eziDala zeSixeko: IiNkqubo ezi-7 zokuTshintsha uBomi boLondolozo
lithetha ntoni inani leengelosi ezingama-444
Ithetha ntoni i-333?
athetha ntoni amanani u-1111